सुन्तलीसँग स्टेजमा नाँचेका कलाकार सन्दिप छेत्रीले भने, ‘धुर्मुस पागल हो भने, मैले संगत गर्दिन्’….(भिडियो सहित) «
सुन्तलीसँग स्टेजमा नाँचेका कलाकार सन्दिप छेत्रीले भने, ‘धुर्मुस पागल हो भने, मैले संगत गर्दिन्’….(भिडियो सहित)
Published : 11 February, 2020 9:50 pm
चितवनमा यतिबेला क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक संकलन गर्न महायज्ञ सञ्चालन भइरकेको छ । रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन जारी महायज्ञमा मुलुकभरका ख्यातीप्राप्त कलाकारहरु प्रस्तुती दिन पुगेका छन् । उनीहरुलाई हौसला दिन पुगेका स्ट्याण्डप कमेडिका चर्चित कलाकार सन्दीप लामिछानेले कार्यक्रममा निकै हँसाएका छन् । उनले सिताराम कट्टेल धुर्मुसलाई क्रिकेट रंगशाला निर्माणमा उनले गरेको मेहनतलाई ब्यगं गर्दै झटारो हा’नेका छन् ।
दर्शकलाई निकै हँसाएका सन्दिपले त्यहाँ नृत्य पनि प्रस्तुत गरका थिए । कलाकारले गरेको सांगेतिक प्रस्तुतीमा कम्मर मर्काइ मर्काइ नाच्ने गरेकी कुञ्जना घिमिरे सुन्तलीले सन्दिपलाई पनि नाचमा साथ दिएकी थिइन् । महायज्ञमा अहिले सम्म हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल, लोक गायीका कमला घिमिरे, एबीसी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम इन्द्रणीका कलाकार लगायतले प्रस्तुती दिइसकेका छन् । इन्द्रेणीका कलाकारले महायज्ञमा कथा सुन्न आउनेहरुवाट डालोमा पैसा संकलन गरिदिएका थिए । डालोमा पैसा राख्नेहरुको तछाड मछाड भएको देखिन्थ्यो ।
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनले निर्माण सुरु गरेको रंगशालाका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन देश भित्र र बाहिर रहेका नेपालीले ठूलो आर्थिक सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै सरकारी निकायले पनि लगानी गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका लगायत त्यस भित्र पर्ने गाउँपालिकाले लगानी गरेका छन् । साथै छिमेकी जिल्लाका गाउँपालिकावाट पनि आर्थिक र भौतिक सहयोग दिने क्रम जारी छ ।